Vahaolana amin'ny olana hafahafa amin'ny flash izay tsy maty amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Inona no hatao momba ny olana hafahafa amin'ny flash izay tsy mamono ny iPhone-nao
Ny olana kely hitantsika ao amin'ny rindrambaiko dia mety manelingelina, saingy heveriko fa tsinontsinona ireo raha oharina amin'ireo izay azontsika tsikaritra ara-batana. Izany dia olana iray izay notaterinao taminay, izay fahitan'ny iPhone 5 ho azy flash tsy maty mihitsy, ary tsy midika velively hoe. Inona no mety hitranga amin'ny iPhone ka tsy maty ny jiro ary inona no azoko atao hanamboarana azy?
Izaho manokana dia tsy ho ela dia hiteny amin'ilay olona voakasik'izany fa ara-batana ny olana, izany hoe ny fitaovana, ary mitady fomba hanamboarana ny iPhone faran'izay haingana. Saingy ny zava-misy dia tsy isika rehetra no manana andraikitra mora maka iPhone amin'ny fanamboarana ny fananganana ofisialy, noho izany, azontsika atao aloha ny manandrana mijery raha mamaha ny tsy fahombiazana isika amin'ny alàlan'ny rindrambaiko. Eto izahay dia manazava izay azontsika atao (na dia mety tsy hahomby aza isika).
1 Tsy maty mihitsy ny jiro jiro iPhone
1.1 Makà sary misy tselatra
1.2 Mamerena mamerina
1.3 Avereno ary havaozy
1.4 Raiso ho fanamboarana
Tsy maty mihitsy ny jiro jiro iPhone
Dia inona no ataontsika? Okay, ny olana dia azo inoana fa ara-batana, saingy afaka mamantatra zavatra vitsivitsy foana isika alohan'ny hitondrana azy ho fanamboarana.
Makà sary misy tselatra
Efa fantatsika fa mandeha ny tselatra fa hanandrana hahatonga azy io ho karazana reset indray. Mba hanaovana izany, ny zavatra tokana hataontsika voalohany indrindra dia ny manokatra ny fakantsary fakan-tsary, alaivo antoka fa ampitaina ny jiro ary maka sary. Antenaina fa hiverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra ity taorian'ny nakana ny sary.
Ianao angamba efa namaky an'ity vahaolana ity imbetsaka, hany ka mety mandreraka, saingy io dia nilaza tamim-pomba ofisialy fa hanery ny hamerenana indray i Apple amboary hatramin'ny 80% amin'ireo olan'ny rindrambaiko kely ireo fa tsy afaka mamaha amin'ny fomba hafa isika. Hanery ny famerenana toy izao izahay:
Tsindrio miaraka amin'ny bokotra fanombohana (trano) sy ny bokotra miafina. Raha manana iPhone 7 na iPhone 7 Plus isika dia soloina ny bokotra bokotra midina.
Mitazona ny bokotra roa izahay mandra-pahitanay ny paoma.
Rehefa mahita ny paoma isika dia mamoaka ny bokotra.
Ho fantatsika raha niasa teo noho eo izy io. Raha tsy izany dia afaka miandry foana ny rafitry ny fiasa isika mba hahitana raha maty indray mandeha indray mandeha ny tselatra.
Avereno ary havaozy
Raha tonga hatreto ianao dia tsy dia tsara tarehy ny raharaha. Mieritreritra aho fa ny fanerena ny famerenana amin'ny laoniny dia tokony hamono ny jirokirantsika raha toa ka lozisialy ny olana, fa alohan'ny hanombohantsika mamindra zavatra hanala na handefa ny iPhone ho any Apple dia mbola afaka mandeha lavitra kokoa isika. Momba ny famerenana amin'ny laoniny iPhone amin'ny iTunes ary manaova fametrahana madio (tsy misy sitrana voaverina). Mandritra ny fizotrany dia ho hitantsika ihany koa raha misy fanavaozana misy. Raha misy dia tsara kokoa ny apetrantsika aminy, mba hofantohanay fa hampiasa ilay kinova farany izahay nefa tsy hisintona izay mety tsy fahombiazan'ny rindrambaiko.
Raiso ho fanamboarana
Ity no navalinay teo am-piandohan'ny lahatsoratra fa ny tsy fahombiazana dia mety ho lesoka ara-batana ary nila fanamboarana iPhone. Amin'ity tranga ity dia hanana safidy telo izahay, efatra raha tena sahy ianao:
Antsoy i Apple mba hahafahan'izy ireo manamboatra ny iPhone. Raha monina akaiky na amin'ny firenena ahafahantsika mandefa ny iPhone any amin'ny atrikasa ofisialy Apple isika, dia tsara kokoa ny miantso azy ireo handamina fotoana amin'ny Apple Store na fanangonana iPhone.
Antsoy i Apple hitondra azy any amin'ny magazay manana alàlana. Izy io dia mitovy amin'ny teboka teo aloha, fa ho an'ireo izay tsy manana orinasa ofisialy eo akaiky eo. Ny antoka dia tokony hitovy amin'ireo natolotry ny Apple tenany.
Ento ny iPhone mankany amin'ny orinasa tsy nahazoana alalana. Toy ny atrikasa fiarakodia, misy ihany koa ny orinasa izay heverina fa afaka manamboatra izay fitaovana elektronika rehetra, misy ny manampahaizana manokana amin'ny fitaovana finday. Amin'ity karazana fananganana ity dia ahitantsika ny zava-drehetra, na amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Mitandrema amin'izany.
Ny tenantsika ihany no manamboatra azy. Azo inoana fa raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao dia satria tsy mahay, fa safidy ho an'ny mpandefa tanana izany.
Manantena aho fa nahavita namono ny jiron'ny flash ianao. Ahoana no nanaovanao azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Inona no hatao momba ny olana hafahafa amin'ny flash izay tsy mamono ny iPhone-nao
Salama, rahampitso tolak'andro, nanazava ny olana tamin'ny iPhone-ko aho, lena io ary tonga tampoka ny flash ary tsy afaka mamono azy aho, 4 ny iPhone-ko, raha misy olona afaka manampy ahy dia tiako ilay izy.
Mety hamono mpandeha 6 amin'ny sidina EgyptAir MS66 ve ny iPhone 804s?